Fibaro - SmartMe
Dom » Fibaro
Ny mpanamboatra poloney FIBARO dia manome vahaolana amin'ny fananganana trano hendry. Azonao atao ny mamaky momba ny fitaovana vaovao toy ny sensor na ny mpanara-maso ny jiro, ny fanafanana na ny roller roller. Ny fanaovana automatique ny tontolon'ny tranonao dia tsy tokony ho sarotra!
Fanentanana iraisana momba an'i Nice Polska sy FIBARO
Ny orinasa Nice Polska, nankalaza ny faha-25 taona niorenany tamin'ity taona ity, dia nifamatotra akaiky tamin'ny fanatanjahantena, indrindra ny amin'ny haingam-pandeha, nandritra ny taona maro. Fiaraha-miasa amin'ny FIBARO, izay nanatevin-daharana ny laharan'ny Nice group tamin'ny taona 2018, nanomana ...
Tonga ny Controller FIBARO Walli
9 Martsa 2021
Fibaro, FIBARO Walli, FIBARO Walli Controller
FIBARO Walli Controller dia bokotra Z-Wave ™ misy rindrina manan-tsaina izay afaka mitarika seho na mifehy ireo fitaovana Z-Wave hafa mampiasa fikambanana. Powered by ny bateria tafiditra na mivantana ankehitriny. Ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny rindrina maromaro an'i Walli. Main ...
Dimmer 2 avy amin'ny FIBARO - famerenana ny dimmer jiro
14 Febroary 2021
manjavozavo, Fibaro, dimmer
Ny fanaraha-maso ny jiro dia toa teboka miharihary amin'ny fametrahana trano an-tsaina. Tsy ny famadihana sy ny famonoana tsotra fotsiny, fa ny fanaraha-maso ny famirapiratana na ny automatisation amin'ny fitaovana hafa Afaka manampy ny FIBARO Dimmer 2.
15 Febroary 2021
foibe, Fibaro, hc3, HC3 Lite
Manana vaovao tsara momba an'i FIBARO izahay! Nanambara ny orinasa fa mamoaka vavahady vaovao - FIBARO Home Center 3 Lite, izay safidy hafa mora vidy kokoa amin'ny HC3. Ny tombony lehibe amin'ny tanjona dia ny vidiny, heverina fa ...
FIBARO Smoke Sensor - famerenana sensor momba ny setroka
24 Janoary 2021
setroka setroka, Fibaro, setroka setroka
FIBARO Smoke Sensor dia sensor izay tsy maintsy ananan'ny mpankafy Smart Home rehetra eo amin'ny sehatry ny Z-Wave. Fa tsy izany ihany, satria azonao atao koa ny mividy izany ho an'i Bebe. Fa maninona Zahao izany 🙂
FIBARO Walli misy loko vaovao
16 Janoary 2021
Raha tianao ny vokatra Smart Home tsara dia manana vaovao tsara izahay. FIBARO dia namoaka ny andiany Walli tamin'ny loko mainty! Jereo hoe inona ny endrik'izy ireo ao amin'ny galeriana etsy ambany.
Ento ireo lahatsoratra bebe kokoa